Ku dhawaad 750 arday oo ka qallin beddeshay jaamacadda Muqdisho | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Ku dhawaad 750 arday oo ka qallin beddeshay jaamacadda Muqdisho
Ku dhawaad 750 arday oo ka qallin beddeshay jaamacadda Muqdisho
Posted by: Ahmed Haaddi October 21, 2018
Muqdisho – Magaalada Muqdisho waxa lagu qabtay munaasabad heer sare loo agaasimay oo ay ku qallin baddesheen arday gaareysa 728 islamarkaana ka kala socday siddeed kuliyadood oo ay hoos imanayaan 18 taqasus.
Munaasabadda oo aheyd mid si qurux badan looga shaqeeyay qaban-qaabada oo ay ka qeyb galeen xubno ka tirsan dowaladda federaalka Soomaaliya iyo marti sharaf kala ayaa ka dhacday hoolka Royal Place Hotel, 18 bihsaan oo ku beegneyd Maalintii khamiista.
Waxaa ka hadlay munaasabadda maamulka jaamacadda iyo marti sharaftii goob joogga u aheyd qallin beddelka ardayda, Dr Daahir Xasan Carab oo ah gudoomiyaha ururka midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo matida soo xaadirtay ka mid ahaa ayaa hambalyo wada jir ah u diray Maamulka iyo ardayda Jaamacada Muqdsiho.
Gudoomiyihii hore ee Jaamacadda Muqdishu Prof Ali sheikh Axmed Abuubakar oo hadal miisaan leh ka jeediyay goobta ayaa ugu danbeyn qallin rogayaasha kula taliyey in aysan waxbarashada hakin oo ay halkooda kasii wadaan, sidoo kale Dr Cali ayaa ardayda siiyey dar-daaran ah in aysan marnaba joojin xiriirka iyaga iyo jaamacadda ka dhaxeeya.
Agaasimaha qeybta tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada Prof C/shakuur Sh.xasan Fiqi ayaa laab furan ku amaanay madaxda sare ee jaamacadda, kuwaasi oo uu ku tilmaamay in ay kusoo shaqeeyeen marxalad aad u adag, sidoo kale Prof Fiqi ayaa kahadlay tayada jaamacadaha dalka iyo qorshahooda sannadka Soo aadan, isaga oo sheegay in aan jaamacad aan shaqeynin aysan liiska ku jiri Karin, maadaama inta badan la sheego in boqoqlaal jaamacad ay Soomaaliya ku yaalaan, taasi oo uu waxba kama jiraam ku tilmaamay.
Munaasabadda waxa dhankiisa kalimad qiima badan gunaanadkii ka jeediyay gudoomiyaha jaamacadda Muqdisho Dr Ibraahiim Maxamed Mursal, waxa uu hambalyo u diray ardayda, isaga oo sidoo kale si weyn u qiray ammaanta loo jeedinayo jaamacadda kuna tilmaamay mid qiimo weyn ku leh gudaha iyo dibadda.
Dr Ibraahiim ayaa taas ugu mahad celiyay ardayda ay jaamacaddu soo saarto oo runtii buu yiri ka dhex muuqda dhainac kasta bulshada heerarkeeda kala duwan.
Jaamacadda Muqdishu oo kamid ah jaamacadihii ugu horeeyay ee laga aasaasay Soomaaliya, waxaa sannadkaan ka aflaxday 728 arday, sida uu sheegayDiiwanhayaha guud ee jaamacadda Dr Maxamed Xasan Nuur.
Qore: Mohamed Hassan Mohamed
Previous: Toban sano kaddib El Clasico oo yeelaneysa weji kale
Next: Maqal:- Casharka Tafsiirka Qur’aanka Idaacadda Himilo “Darsiga 231aad”
About Ahmed Haaddi
Xilli roobaadka iyo xanuunada ka dhalan kara biyaha fadhiya jidadka Muqdisho
Maxaa looga baahan yahay waddanka si caalamku u aqoonsado?
27 Juun: Maalinta ay gobanimada heleen walaalaha reer Jabuuti
Sheekada: Gabadha abaabusha isoo soo baxyada doorashooyinka – balse aanan codeynin